SIFOOYINKA KORITAANKA AZALEAS, BEERASHADA IYO DARYEELKA GURIGA - AZALEA
Qolka azalea: sharaxaad
Azalea (Latin Azalea) waa koox ka mid ah noocyada dhirta ubax ee Rhododendron genus, qoyska Heather. Wadanka dalaggu waa wadamada bariga ee Shiinaha iyo Japan, laakiin mararka qaar waxaa laga helaa qaaradda waqooyiga Ameerika iyo koonfurta Yurub. Magaca "azalea" wuxuu ka yimid Giriigga waxaana loola jeedaa "qalalan". Waxay u yeedheen sidaas darteed muuqaalka, sida caadiga ah waa geedo qallalan ee cabbirka yar. Qolka Azalea wuxuu ku jiraa da'da 3 - 4 sano. Inta badan, ubaxa waa casaan casri ah, laakiin waxaa sidoo kale jira marar dhaadheer oo cad, midab leh, lilac, casaan, ama xitaa laba-tone ubax. Tufaaxa ubaxa waa xitaa, wax yar oo loo yaqaan 'terry or terry'. Dabeecadda, waxaa jira qiyaastii 350 wakiil oo ka mid ah azaleas, kuwaas oo labo ka mid ahi yihiin qol.
Nooca ugu caansan ee guriga azadea waa Hindiya. Caleemaha waa mid yar, midab madow oo midab leh, gaaban oo gaaban, oo ku daboolan timaha guduudan. Ubax waa casaan leh, gaaraya dhexroor 3 ilaa 5 cm, ubaxyada xilliga qaboobaha.
Iyo nooca labaad - Japanese azalea, sidoo kale ku xoortay geedo dufan, kaliya wax yar ka hooseeya. Farqiga ugu weyn ee laga helo Hindiya ee ubaxyada ubaxyada - waxay aad u yaryihiin. Noocani waa la kori karaa oo kaliya qolka, laakiin sidoo kale beerta.
Ma taqaanaa? Hadiyad aad loo jecel yahay dabaaldega kasta waa dhererka dheriga, laakiin daryeelka guriga aan habooneyn, si deg deg ah ayuu u dhacaa oo u dhinto. Marka aad iibsanayso ubax yaralea, waa muhiim in la doorto tusaale ahaan tiro badan oo ka mid ah burooyinkeeda. Cunto noocan oo kale ah ayaa si dhakhso ah ula qabsan doonta deegaan cusub waxayna sii dheeraan doontaa iyada oo ubaxyada yaabka leh.
Halkee in la dhigo azalea, doorashada ee goobta ubaxa
Waxaa lagama maarmaan ah in la aqoonsado in azalea waa warshad aad u furan, sidaas darteed, si ay u fadlan si aad u badan oo suurtogal ah leh ubax badan, waxaad u baahan tahay inaad isku daydo inaad hesho meel raaxo leh si ay u sii.
Azalea waa warshad iftiin leh, laakiin uma dulqaadanayso qorraxda tooska ah. Waa habboon in la dhigo balkoon lagu qurxiyo ama xayawaanka daaqada ee bari, waqooyiga ama galbeedka. Waxa ugu muhiimsan waa in la siiyo warshad leh iftiin kala duwan ama hooska qayb ahaan.
Waa maxay heerkulka iyo qoyaanka
Ubaxa azalea wuxuu u baahan yahay xaalado heerkul oo gaar ah, taas oo adkayn karta daryeelka guriga, tan iyo cimilada qolalka fadhiga had iyo jeer maahan mid ku haboon. Heerkulka ugu fiican ee ubaxan waa +15 ... +18 ° C. Ma fududa in la abuuro shuruudaha noocan oo kale ah qolka fadhiga, sidaas awgeed waxaa fiican in la dhigo azalea on balakoonka kuleylka ah, waddada aan kulaylka lahayn ama meel kale oo qaboow ah.
Inta lagu jiro muddada samaynta budo, waxaa lagu talinayaa in la yareeyo heerkulka ilaa + 10 ... + 12 ° C. Xilliga xagaaga, azalea waa in laga ilaaliyaa kuleylka, sidaa daraadeed waxaa lagugula talinayaa inaad dhigto qol hawo leh si loo ilaaliyo heerkulka +18 ° C In kulul, hawada sultry ee guryaha caadiga ah ama on windowsill hoos batari kulul, azalea si deg deg ah u dhiman doonaa.
Qoyaanka ugu wanaagsan ee loogu talagalay azaleas ayaa muhiim u ah sida heerkulka, sidaas darteed way adkaan doontaa in ay guriga ku hayso hawo qalalan. Xallinta dhibaatada heerkul aad u sarreeya ayaa caawin karta Ku buufinta saxda ah ama nuujiyaha hawada guriga. Ku buufinta Azalea waa inay ahaato mid fiican waxayna qabataa biyo qabow. Waxaa loo wareejin karaa weelasha dhirta oo biyo ah uumi ahaan.
Waa muhiim! Waxaad ma ku buufin kartaa azaleas inta lagu jiro xilliga ubax - ubaxyo jilicsan madow ka soo biyo.
Qaababka qolka azalea
Qolalka azaleas waxay leeyihiin astaamahooda gaarka ah ee beerto iyo daryeel dheeraad ah, oo ay tahay in la ilaaliyo si loo kobciyo warshad caafimaad leh oo qoyan oo ubax leh.
Maxay noqonayaan ciidda beeritaanka
Azalea waa mid ka mid ah dhowr dhirta indoor-ka ee koraya carrada acidic. Heather dhul ama isku dar ah oo ah peat iyo dhul-beereed oo ah 2: 1, oo lagu daro qadar yar oo ciid ah, ayaa ku haboon beerashada. Dukaamada gaarka ah, waxaad ka iibsan kartaa isku dar ah ciidda loogu talagalay dhirta acidophilic sii kordhaya (carrada acidic jecel).
Azalea wuxuu leeyahay nidaam xidid ah, sidaas daraadeed dheriga ceelka waa in loo doortaa beeritaanka sidaa daraadeed xididadu waxay noqon karaan sida ugu dhow ee suuragalka ah dusha sare ee dhulka.
Ka hor inta aanad ku beeranin azalea guriga, waxaad u baahan tahay inaad ku diyaariso dheriyo leh lakab dabacsan oo lebbiska jajaban ama qoryaha yaryar ah horay loo sii wado. Markaas dhig ciidda diyaarisay ee taangiga iyo dhirta gooynta azalea, qodaya hal iyo badh ilaa laba sentimitir. Haddii dhowr gooyn lagu dhex beeray hal weel, masaafada u dhaxaysa waa inay ahaato 4-5 cm. Kadib markaad ka soo baxdo, gooynta waa in la daboolaa si loo hubiyo saameyntooda koritaanka iyo qoyaanka sare. At heerkul ah +25 ° C iyo qoyaan ah ugu yaraan 80%, geedo azalea waxay noqon doonaan xidido adag laba bilood.
Xeerarka daryeelaya azalea guriga
Azalea waxay u baahan tahay adeegyo daryeel oo dhammaystiran, oo ay ka mid yihiin waraabinta, quudinta, gooye, qanjirada iyo dib u goynta.
Ku waraabinta azaleas waa inay noqotaa mid joogta ah, waa inaadan ogolaanin ciidda inay qalajiso. Biyaha waraabinta waxay ku haboontahay oo kali ah, jilicsan oo la sifeeyaa, way ka fiican tahay haddii ay yar tahay qabow. Haddii ciidda ay yar tahay qallalan, waxaad dheri ku dari kartaa azalea weel biyo ah dhowr saacadood. Haddii azalea uu ku koray aqalka dhirta lagu koriyo, ka dibna xilliga qaboobaha waxaa lagu talinayaa in lagu jiifiyo baraf ama baraf dusha sare ee ciidda u dhow geedka. Waa wax aan loo baahnayn in la daboolo ciidda, dhirtu waxay leedahay dhuuban, xididdada jilicsan ee ku yaala dusha sare waxayna si fudud u dhaawacmayaan.
Ma taqaanaa? Haddii aad ku darto dhowr dhibcood oo liin ah si biyo ah loogu waraabiyo waraabka, ubaxu wuxuu noqon doonaa mid ka sii badan. Tani waa in aan lagu sameynin biyo kasta, laakiin laba jeer bishii.
Ku sii daa yaralea guga iyo xagaaga, hal mar toddobaadkii. Superphosphate, ammonium sulfate, sulfite potassium, ammonium nitrate ayaa loo isticmaalaa. Inta lagu jiro guntinta dhirta, waxaa lagu talinayaa in lagu isticmaalo superphosphate at heerka of 15 g halkii 10 litir oo biyo ah.
Sidee loo dhajiyaa azalea
Si azalea bloom qurux badan, geedka waa in la gooyaa waqtiga. Ujeedada manjooyin noocan oo kale ah waa in la sameeyo taajir is dul saaran iyo buro isku mid ah. Gooyo waxaa la fuliyaa ugu dambeyn Maarso - Abriil ee noocyada hore, iyo May - June ee loogu talagalay kuwa dambe. Waa mid aad u muhiim ah in aan la daahdo manjooyin, haddii kale ubbooyinku ubax ma samayn doono waqtiga iyo ubaxu waxay noqon doontaa daciif. In azaleas waxay u sameeyaan taaj laba nooc: qaab ah geed yar ama geed. Si ay u sameeyaan geedka, waxay doortaan mid ka mid ah laanta ugu xooggan ee baadiyaha yar yar waxayna ka soo baxaan garbo ka sameysan, inta kale ee caleemaha la gooyaa.
Ka dib marka jirku korayo, waxaad u baahan tahay inaad ku dhejisid farta. Ka dib markaa, geedku wuxuu bilaabmaa laan, wuxuu u baahan doonaa inuu sii wado si joogto ah u leexiyo lana jiido laanta dhinacyada si uu u helo taaj qoto dheer. Haddii aad ka baxdo qaabka baadiyaha, manjooyin sanadlaha ah ayaa hoos u dhacaya si loo yareeyo dhammaan caleemaha mid hore iyo ka saara caleemaha aan loo baahnayn iyo kuwa daciifka ah ee ku dhufta qaabka baadiyaha.
Ka dib 2 ilaa 2.5 bilood ka dib markii la gooyo gooyo dhalinyaro ah waxay jiidayaan si kor loogu qaado koritaanka caleemaha cusub. Isla mar ahaantaana, ubaxyo cusub oo laga yaabo inay soo muuqdaan, ayaa laga saaraa, maadaama ay joojinayaan abuurista caleemo cusub. Qanjaruufo soo noqnoqda ayaa la sameeyaa 3 bilood ka dib, gooyaa dhirta ilaa 4-6 caleemaha. Si loo abuuro baadiyaha foomka saxda ah, dushooda dhirta waxaa lagu xoqay 10-12 cm dhulka, iyo baadiyaha ayaa loo jeestay oo caleemaha dhinaca ayaa la jarjaray si ay laamaha u koraan si siman.
Sidee iyo goorma u bedelaan dhirta 'azalea'?
Dhaqdhaqaaqyada daryeelka, oo ay ka mid yihiin waxyaabo kale, waxay sidoo kale bixiyaan qadar yaraanta beerka, kaas oo sanad walba lagu sameeyo guriga. Waxaa ugu wanaagsan in la soo celiyo geedka xilliga jiilaalka ka dib marka uu ubaxsado. Sannad kasta, waxaad u baahan tahay inaad dhirato dhalinyaro ah, oo dadka waaweyni waxay ku filnaan doonaan hal mar labadii sanaba mar. Qalab ku-beddelashada adoo isticmaalaya dheriyo gacmeed iyo isku dar ah oo ah peat iyo pine land oo lagu daro ciid. Waxay si aad ah u sameeyaan si taxadar leh, iyagoo isticmaalaya habka loo yaqaan 'coma land', sababtoo ah azaleas waxay leeyihiin xidid aad u khafiif ah oo xididdada jilicsan ee si sahlan u dhaawacma.
Cudurada ugu waaweyn ee Azalea iyo cayayaanka
Azalea waxaa badanaa soo weerara cayayaanka, sida caarada azalea, caleenta cagaarka ah ee cagaaran, mealybuga iyo kuwa kale .Dood Azalea waa cayayaan dhir ah oo khaas ah oo burburiya caleemaha, taas oo markaa qalalan, qallajisa, oo u dhinta. Cayayaanka qashinka ah ee dadka waawayn ayaa ku qulqulaya caleemo caafimaad leh, u duub oo tuubooyinka ku sii daa oo sii wad.
Whitefly ayaa sidoo kale waxyeello caleemaha azalea, fangaska sootka ah oo ku salaysan qarsoodiga sonkorta leh. Intaa waxaa dheer, whitefly qaadaa cudurada fayruska ee khatarta ah dalagyo ubax. Caarada Strawberry waxay waxyeello u geysataa azaleas, sababtoo ah caleemaha yar yar ee dhirta ah ee gudaha gadaal u ah, halkii laba ka mid ah oo waaweyn, kuwa cusub ee yar yar, kuwa yar yar ee aan la karin, waa la abuurayaa. Geedaha ayaa hoos u dhiga koritaanka waxayna u dhintaan wakhti ka dib.
Sidoo kale azaleas waxay u nugul yihiin cuduro badan (1 g halkii 10 litir oo biyo ah) iyo sidoo kale Plant Pin ama Etisso si fiican uga caawiya cuduradan iyo cayayaanka, taas oo dhulka ku dherersan fogaan ah 2 cm oo ah asliga ah.
Qolalka habka taranta ee yaralea
Azalea ayaa badanaa dib u tarjumaysa goynta. Gooynta ku saabsan 9 cm dheer waa laga gooyaa warshad caafimaad leh hal mar sanadkii. Qaybaha labaduba waa kuwa ugu hooseeya, ee ka hooseeya kelyaha. Waraaqaha hoose ee jirida ayaa la saaraa, iyo kuwa sare ayaa la gooyaa kala badh. Kadibna gooynta gooyaa waxaa lagu uruuriyaa xirmooyinka 8 - 10 gogo 'waxaana loo yareeyey 8-10 saacadood kiciyaha kobaca. Gooyn ayaa lagu dhex beeray weelasha gacmeed, oo ah ciidda hore loo diyaariyey si qoto dheer ah 1.5-2 cm, ka dibna lagu daboolay si loo abuuro saameyn aqallada dhirta lagu koriyo.
Geedo waxay u baahan yihiin in ay si joogto ah u hawo qalajiyaan, ka qaadaan filimka muddo ah. Waa inaanan oggolaan qorshaha, heer-kulka heerkulku waa +22 ° C Ka dib markii geedo qaado xididka, filimka laga saaray, dhirta bilaabaan si joogto ah biyaha iyo buufin. Marka caleemaha koraan ilaa 3 cm, waa waqti ay ku beeri in dheriyo kala gooni ah.
Xiisado yar: sida loo sameeyo azalea mudo dheer
Waxaa jira dhowr qarsoodi ah oo ku saabsan sida loo ilaaliyo azalea dukaanka lagu iibsaday si aaney u sii farxi doonin isha ubaxeeda oo aan dhiman doonin ka dib marka tufaaxu dhaco. Si arrintan loo sameeyo, ka dib markaad ubaxdo, waxaad u baahan tahay inaad dhirta ka qaaddid dheriga oo ku rid weel biyo leh qabow si aad u dhaqdo xididdada isku dhafka dhulka hoostiisa oo ay ku korodhay, oo ka saaro xididdada dhintay. Markaas nidaamka xididka waa in la raaciyaa xal of manganese iyo dhirta dhirta ee isku dar ah ciidda loogu talagalay azaleas. Qiyaastii hal usbuuc, azalea waxay siin doontaa waraaqo cusub, waxay ku iman doontaa nolosha waxayna weli ku faraxsan tahay ubax qurux badan.